DEG DEG:- Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab oo NISA isku soo dhiibay (SAWIRO+DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab oo NISA isku soo dhiibay (SAWIRO+DHAGEYSO)
Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab ayaa goordhaw isku soo dhiibay hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, iyadoona muuqaalka sarkaalkaasi loo soo bandhigay warbaahinta.
Sarkaalkaasi oo magaciisa lagu sheegay Ibraahim Aadan Ibraahim oo loo yaqaano “Ibraahim Nadaara” ayaa Al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca waxbarashada ee gobalada Bay iyo Bakool. waxaana uu xiriir lasoo sameeyay saraakiil ka tirsan hay’adda nabad-sugidda ee NISA, iyadoona ugu dambeyntii la qaabilay.
Wuxuu sheegay inuu Al-shabaab ka tirsanaa muddo 9 sano ah islamarkaana muddo 2 sano laga joogo uu go’aan ku gaaray inuu isaga baxo Shabaabka, kadib markii uu sheegay inuu arkay sida diinta Islaamka iyo ku dhaqanka shareecadda islaamka looga been sheegayo.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay oo Alle ugu mahad-celinayaa inaan isaga soo baxay Al-shabaab, waxaan go’aansaday inaa isaga soo baxo Shabaabka kadib markii aa arkay in laga been sheegaayo ku dhaqanka diinta iyo shareecadda Islaamka, waxaana arrinkaasi si aad ah ugu dhiiraday kadib markii aan maqlay balanqaadkii madaxweynaha ee ku aadanaa in qofkii kasoo laabta Al-Shabaab la cafin doono” Sidaas waxaa yiri Ibraahim Aadan Ibraahim oo ah sarkaalka Shabaabka kasoo goostay.
Dhianca kale, saraakiisha hay’adda nabad-sugidda qaranka ee NISA weli kama aysan hadlin sarkaalkaan sare ee ka tirsan Al-shabaab ee isku soo dhiibay, waxaana uu sarkaalkaasi sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu kasoo goosto Al-shabaab.